Folkpartiet:Mowaadinimada Sharuud ha Looga Dhigo Af-Iswediska - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Folkpartiet:Mowaadinimada Sharuud ha Looga Dhigo Af-Iswediska
La daabacay tisdag 12 juni 2012 kl 09.26
Wax ha laga badalo lacagta waaridnimada si aan haweenka galootiga looga hor istaagin barashada af-iswedhiska, waxbaridona ha ahaato mid ahmiyad shaqadeed ku dhisan, afka-iswedhiskuna ha ahaado sharuud marka uu qofka dalbanayo mowaadinimada. Sadexdaas hindise waxay ka mid tahay sideed hindisood oo ka mid ah barnaamijka xisbiga Folkpartiet ee isdhexgalka kaas oo ay maantay soo bandhigeen.
Hogaamiyaha xisbiga Folkpartiet Jan Björklund oo saakay u waramayey barnaamij ka baxa radio Sweden oo la yiraahdo p1-morgon ayaa sheegay in Afka-iswedhiska oo la bartaa muhiimad u leedahay isdhexgalka bulshada.
- Waxaan aaminsanahay in luuqada Af-iswedhiska la barto muhiimad leedahay hadii la doonayo in isdhexgalko uu hagaago dalkaan Sweden. Badanaa waxay shardi u tahay sidii uu qofku shaqo ku heli lahaa oo uuna uga soobixi lahaa shaqadaas iyo in uu bulshada la qabsado. Kuwa aan baranin afka dhibweeyn ayaa ka haysta la qabsiga bulshada dalkaan, ayuu yeri Jan björklund.
Mar uu ka jawaabayey su'aal ahayd maxuu hindisihiina soo kordhinayaa mar hadii xisbiyada aad dowladd wadaaga tahiin aysan xiisaynaynin? Ayuu yeri, waan aan isku taxluujinaa sidaan uga dhaadhicin lahayn saaxiibadeen, ma ahan in lays dhiibo hadaan horay laga qaadan talooyinkaaga. Hadaad aaminsantahay in aad saxsantahay waa in aad iskudaydaa sida aad uga dhaadhicin lahayd kuwo kale, ayuu yeri.
Mehmet Kaplan oo xisbiga MP u fadhiya barlamaanka ayaa ku tilmaamay hindisaha ka soo yeeray FP mid muujinaya figrad la'aan haysata xisbigaas kaas oo ka dabawareegaya sida uu hadalka u dhigay figrado baaray oo ay ka mid tahay tusaale aahaan sharuuda ah in uu qofku yaqaano Af-swedhishka markuu dalbanayo dhalashada dalkaan.
- Hadii lix-sanno kabacdii oo xisbigaan ka mid ahaa dowladda uusan awoodin in uu soo bandhigo figarado cusob waa mid leh dhibaatadeeda. Lix-sanno ayaaga mas'uul ka ahaa isdhexgalka waxayna hada soo bandhigeen hindisoyaal gaboobay oo xoogaa layaro nash nashay. Taas waxay cadeynaysa in ay ku guul daraysteen arimahaaan. Dowladda waxaa hor yaala tirokoobyo adag oo tahay in ay xal u keento marka laga hadlayo isdhexgalka, halka ay la soo suuqtagi lahaayd fikrado ah imtixaanka luuqada. In aysan weli taas ka korin waxay marqaati ka tahay siday u guul daraysteen.
Hindisaha FP oo laga canbaareeyey Twitterka